Zaza telo naiditra hopitaly: mitobaka eny an-tsena ny kilalao mampidi-doza | NewsMada
Didim-poitra, fetin’ny Fahaleovantena… “Iray volan’ny ankizy”, fotoana mampirohotra ny ray aman-dreny hividy kilalao ho an-janany. Mila mitandrina satria misy ireo kilalao mampidi-doza, toa ny “mozika kely” eto amin’ny sary, izay nampiditra hopitaly zaza telo ny faran’ny herinandro teo.
Araka ny fampahafantarana nataon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, ny 14 jona lasa teo, niteraka fahasemporana eo amin’ny zaza, indrindra ireo latsaky ny enina taona, ny kilalao miendrika zavamaneno tsofina iray, vita sinoa. Izany dia niainga tamin’ny tatitra voarainy, tamin’iny herinandro lasa iny.
Voalaza ao anatin’izany tatitra izany fa tao anatin’ny telo andro monja, zaza telo no niditra teny amin’ny hopitaly Soavinandriana (Cenhosoa), noho ny fahasemporana vokatry ny fahatsentsenan’ny lalan-drivotra.
Misy ihany ny ray aman-dreny mahay manao vonjy aina rehefa sempotra toy ireny ny zazakely. Raha ny fampahafantarana nataon’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka hatrany anefa, mitarika olana goavana mihitsy ity kilalao ity. Tsy vitan’ny fitaovana “bronchoscopie” ny fanesorana ilay zavatra kely manentsina fa mila fandidiana, izany hoe toranina mihitsy ilay zaza.
Manoloana izao tranga izao, miantso ny tompon’andraiki-panjakana ny minisiteran’ny Fahasalamana mba hanao fanadihadiana manokana mikasika ireny vokatra ireny sao mbola misy mampidi-doza toy izao. “Tokony hampahafantarina eo ivelan’ireny entana tsy azo hanina ireny ny mombamomba azy sao tafatelina na mety hanempotra”, hoy hatrany ny voalazan’ny minisiteran’ny Fahasalambana.
Mbola mitobaka eny an-tsena
Hisorohana ny fiverenan’ny tranga toy ity, miantso ny rehetra ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka mba hisian’ny fampianarana mikasika ny vonjy aina. Tokony hovoakasik’izany ny ray aman-dreny, ny any an-tsekoly, ny orinasa, ny toeram-pitaizana zazakely na “crèches”, sns. Manentana ny ray aman-dreny koa izy tsy hanome kilalao na sakafo mety hampidi-doza ny zanany, indrindra ireo latsaky ny efa-taona.
Efa tamin’ny 14 jona teo ity fampahafantarana nataon’ny minisiteran’ny Fahasalamana ity. Ny mahagaga, hatreto, tsy misy ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ireo kilalao nampidi-doza sy ireo ahina hampidi-doza, mbola mitobaka eny an-tsena. Anisan’izany ny balônina misy lohany plastika, maneno rehefa tsofina, izay mbola azo tsofina tsara na vaky aza ilay balônina kanefa mety ho tafatelin’ny zaza.
Mampidi-doza koa ireo karazana tsipoapoaka, ary izay indrindra ny nahatonga ny fanjakana nandrara azy ireny. Ny mahagaga, mbola misy ihany ny mahita azy ireny. Mbola mitohy ny fanafarana? Raha lazaina fa tahiry mantsy, tsy inoana ny hananan’ny any an-tokantrano tsipoapoaka efa tamin’ny taon-dasa. Raha mbola misy kosa ny mivarotra, nahoana no tsy noraofina izy ireny?